Udiyaar garowga Munaasabada 26 June | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Udiyaar garowga Munaasabada 26 June
Udiyaar garowga Munaasabada 26 June
Munaasabada 26-ka June oo ah Munaasabad Qiimo weyn ugu fadhida Umada Soomaaliyeed ayaa waxaa ay ka mid tahay Munaasabadah Taariikhda dalkeen Soomaaliya Qaaliga ku ah.
waxaynaa ka mid tahay maalmaaha ku xusaan Xoriyad Doonkii ee Dalka ka jiray ,Sannadkii 1960-kii Iyadoo uu xooggeystay Dhaqdhaaqyada lagu doonayay Xoriyad doonka ee Guud ahaan ka soconayay geyiga Somaaliya, xuska iyo qabaan qabada loogu dabaal dagayo maalmaah xornima doonka ayaa waxaa sanadda waliba marka ay garto 26june iyo 27 june ilaa Koowda Luliyo waxaa looga dabaal daga guud ahaan Dalka .
caway ayaa waxay marka ay sacaadu tahay 12 -Kii Habeenimo lasari doona calanka Jamuuriyada wana xiligi ayaa si rasmiyaa gayiga Soomaaliyeed laga luulay Calanka Jamuuriyada.
munaasabadda lagu xusayo 26june ee sanaddkii 1960-kii dhaqdhaqaaqi xoriyada iyo hirgalinti sidi calanka soomaaliya loga tagi lahaa gayiga soomaaliyeed ayaa caway waxaa lagu qaban doona magaaladda muqdisho.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo qalabbeeyey Isbitaalka Xoogga
Next articleGuddoomiyaha Bankiga dhexe oo sheegay in sare u kaca sicirka ay waxa ka qaban doonaan